C4I Statement about the current situation in Israel – Adhik Post
Home/Global News/Middle East-West/C4I Statement about the current situation in Israel
Global News/Middle East-WestInternational PoliticsMedia Advocacy and ActivismMedia Journalism and Informationनेपाली भाषामा (News in Nepali language)
Bidur AdhikariMay 12, 2021
C4I statement on current Israel-Palestine issue here:
इजराएलको वर्तमान अवस्थाबारे क्रिश्चिएन्स फर इजराएलको वक्तव्यः
अहिले इजराएल गाजाबाट हमासले गरेको आक्रमण अनि यरूशलेममा प्यालेस्टिनीहरूले गरेको दंगाको चपेटामा छ । अधिकांश मूलधारका संचार माध्यमहरूले हामीलाई बताउँछन् कि यरूशलेमबाट प्यालेस्टिनीहरू घरवास निकाला गरिएको कारण यो दंगा क्रोध र हिंसा भड्केको हो । तर यसको खास कारणचाहिँ के हो त ?
खासमा यो दंगा र विरोधप्रदर्शनको तयारी हप्ताैं पहिलेदेखि भइरहेको थियो । प्यालेस्टिनीहरूले मन्दिर रहेको पर्वत (Temple Mount) मा स्थित अल अस्का मस्जिद (Al Aqsa Mosque) मा हातहतियारहरू थुपारीरहेका थिए । अनि हमासले गोप्य रूपमा तेल अविव र यरूशलेमसम्म प्रहार गर्न सक्ने सयाैं वा अझ भनाैं हजाराैं अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र र रकेटहरू त्यहाँ लगिरहेको थियो, अनि हिंसा सुरू गरेर इजराएली नागरिकहरूमाथि निशाना साध्न माैका पर्खिरहेको थियो ।
प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति अब्बास (President Abbas) ले भर्खरै मात्र निर्वाचन रद्द गरेको थिए । जनमत सर्वेक्षणमा उनको पक्षमा कमजोर मत थियो । १६ वर्षअगि ४ वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको भए तापनि उनी अझै राष्ट्रपतिको पदमा कायमै छन् । प्यालेस्टिनीहरूमा माझमा ठूलो असन्तुष्टि छ । त्यसैकारण महमुद अब्बासको पार्टी फतहले प्यालेस्टिनीहरूको ध्यान अरूनैतर्फ मोड्नका खोजेको हो । तिनीहरूले यो हिंसाको वातावरण सृजना गरेका हुन् र यसलाई उक्साएका हुन् ।
यरूशलेममा दंगा मच्चिनासाथ हमासले गाजाबाट इस्राएली बस्तीहरूमाथि आक्रमण सुरू गर्यो । साथै धेरै आगोका बलुनहरू (fire balloons) पनि उडाइए जसले एस्राएलीहरूका खेतीपाती र संरक्षति सम्पदाहरूमा आगलागी गरायो ।
हुनेभनिएका निर्वाचन जुन पहिलेका यहूदी क्षेत्रमा हुनुपर्ने थियो (सिमोन हत्सादिक जसलाइ शेख जार्रा भनिन्छ), त्यसलाइ प्यालेस्टिनीहरूले दंगा र हिंसा सुरू गर्ने विवादको विषय बनाए । अधिकांश पश्चिमी र मूलधारका मिडियाहरूले के देखाइरहेका छन भने इजराएली सेनाले प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूको वस्तीबाट धपाउँदैछ ताकि त्यहाँ यहूदीहरू अतिक्रमणवादी वा उपनिवेशवादीहरूलाइ स्थापित गर्न सकियोस् । तर त्यस क्षेत्रका प्यालेस्टिनी वासिन्दाहरूलाई अदालती प्रकृयाद्वारा आफ्नो हक प्रमाणित गरेर न्याय प्राप्त गर्नका लागि वर्षाैंदेखि प्रशस्त अवसर थियो । उनीहरूले १९९३ देखि घरका वैधानिक खास मालिकहरूलाई कर भाडा तिर्न इन्कार गरेका थिए। त्यस क्षेत्रका खास यहूदी बासिन्दाहरू जोर्डनले गरेको अतिक्रमणको क्रममा (१९४८-१९६७) त्यहाँबाट निकाला गरिएका थिए । यो मुद्दा दशकाैंदेखि अदालतमा चलिरहेको छ, त्यसकारण यो विवाद नयाँ होइन ।
रकेट आक्रमण र हिंसाको कारण, साथै खासमा के भईरहेको छ भन्ने बारेमा भ्रामक समाचारको कारणा कष्टमा परेका दुवै तर्फका मानिसहरूको बारेमा हामी दुःखित छाैं । क्रिश्चिएन्स फर इजराएल इन्टरनेसनलका रूपमा हामी इजराएली नागरिक र बासिन्दाहरूको पक्षमा छाैं र प्रार्थना र सहायता गरिरहेका छाैं । इजराएलका शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्नेहरू, गाजाका बासिन्दाहरूका लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छाैं अनि इजराएलीहरूको विनाश चाहने तत्वहरूबाट प्यालेस्टिनीहरू मुक्त हाेउन् भन्ने पनि प्रार्थना गर्छाैं ।
“पर्वतहरूतिर म आफ्‍ना आँखा उचाल्‍छु। मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ?
स्‍वर्ग र पृथ्‍वी सृजना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ।
उहाँले तिम्रा खुट्टा चिप्‍लन दिनुहुनेछैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिल्‍यै उँघ्‍‌नुहुनेछैन।
साँच्‍ची नै इस्राएललाई रक्षा गर्नुहुनेचाहिँ न त उँघ्‍‌नुहुन्‍छ न सुत्‍नुहुन्‍छ।”
C4i Dr Leon MeijerI Israel Rev. Cornelis Kant rocket attacks srael Statement Support
Myanmar military conducts air strikes on dissidents